U-Alexander Vasiliev ulwa nomdlavuza we-prostate.
Umlingisi u-Alexander Kuznetsov ababukeli basekhaya bakhumbula izindima eziyinhloko kumafilimu athi "uJack Eighteen-American" no- "Primorsky Boulevard." U-Kuznetsov ungomunye wabamdlali abambalwa baseRussia abaphumelele ukwenza umsebenzi wefilimu eHollywood.
Manje umculi uhlala emazweni amabili, eqoshwa kokubili eRussia naseMelika.
U-Alexander uphelele kahle, futhi isikhathi eside akazange asole ukuthi wayegula. Ngemva kokuhlolwa emtholampilo, uVuznetsov wafunda ukuthi wayene-oncology. Izindaba zakamuva zamesaba umlingisi:
Ngemva kokubuyela eMoscow ngemva kokuhlolwa, ngathola ukuxilongwa okukhulu - umdlavuza wesicathulo. Kwesinye isigaba sesibili sesithathu. Yebo, wesaba ukwesaba! Phela, akukho zimpawu ezimbi ezingase zixwayise, empilweni yami engikaze ngiyibone. Icala libe yingozi kakhulu - amangqamuzana omdlavuza asevele ehamba ngaphezu kwe-prostate. Ngakho-ke, nganikezwa umsebenzi ophuthumayo.
U-Alexander Kuznetsov waphulukisa i-oncology ngezindlela ezingafani
Ukusebenza kwaholela ezinkingeni: ukulimala okwakhiwa emgodini wesisu ngenxa yokuthi isitsha segazi asivaliwe. Odokotela benza olunye umsebenzi, okwathi ngemva kwalokho umlingisi kwakudingeka athole ukwelashwa kwemishanguzo.
Naphezu kokwelashwa, odokotela abazange banikele izibikezelo ezikhuthazayo. Lesi sifo sathuthuka. Mayelana nokuthi u-Alexander Kuznetsov uyagula, izihlobo zakhe kuphela ezazizi.
Umculi akayekanga. UZuznetsov wanquma ukusebenzisa izindlela ezingezona zendabuko zokwelashwa futhi waphendukela kumuntu osuka eBrazil. Emva kwenkambo yokuphulukisa, lo mculi wazizwa kangcono kakhulu. Lapho ebuyela eMoscow, uKuznetsov wenza ukuhlolwa kwegazi, imiphumela eyathokozisa: inkomba ye-PSA yehle kusuka ku-18.46 kuya ku-8.58 (ngesilinganiso se-4). Manje umculi udinga ukuhamba enye inkambo ne-Brazilian healer.
U-Yana Rudkovskaya wazama ukuhlazisa u-Ilya Averbukh, kodwa wazihlambalaza
UVictor Saltykov ubonise ukuthi uLera Kudryavtseva ubonakala kanjani ngaphandle kwe-photoshop
UDana Borisova wehla ngenxa "yehlukaniso" yabangcolile
"Ngifile" - U-Alesya Kafelnikova ubuyele ku-Instagram, video
Isikhundla sezintandokazi kanye nobunjwa bomuntu
Uma umuntu ayeka ukunaka
Amahora amabili okuthakazelisa ephepheni elimhlophe
Spring Springing 2016
I-Focaccia nefulawa ogcwele okusanhlamvu rosemary
Ikhefu lokuqala lokuhlanganyela, yiziphi izinkinga?
Kumele kube nini izinqubo zamanzi zengane ezelwe
I-yoga yezintambo ezithambile
Isibikezelo sezinkanyezi sezimpawu zezinkanyezi
Ukufunda ukwenza amabele akho abe amahle kakhulu
Ukuhlambalaza komuntu othandekayo, ungathembi